Mageia 7 ikozvino yavapo, kuchine 32-bit vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Kugoverwa
Mazuva mashoma apfuura, Ubuntu yakadonhedza chiziviso bhomba ichiti yaive ichidonhedza rutsigiro rweiyo i386 yekuvakisa. Kupera kwenyaya kwatozivikanwa kare: vakadzokera uye vacharamba vachipa rutsigiro rwema32bits, kunyangwe chete kune maficha akagadzirwa pasi peichi chivakwa (hapazove ne32bits masystem). Vashandisi vanoda kushandisa 32-bit vhezheni yeLinux vanofanirwa kushandisa dzimwe nzira, senge mashiripiti 7 iyo yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza.
Mageia 7 yasvika makore maviri mushure meyechitanhatu vhezheni yeiyo imwechete yekushandisa system. Inosvika ine yakagadziridzwa mapakeji izvo isu ticha tsanangudza mushure mekucheka uye iri Fork kubva kuMandriva, inoshanda sisitimu yakawana mukurumbira pakutanga kwegumi regumi. SaMandriva 6, iyi vhezheni ichave nemakore maviri ekutsigira rutsigiro, panguva iyoyo, kana pasina chinoitika, Mandriva 8 ichaburitswa.
Chii Chitsva muMageia 7
Shanduro nyowani dzenzvimbo dzemifananidzo: Plasma 5.15.4, GNOME 3.32 uye Xfce 4.14pre.
Mageia 7 inowanikwa mumhando mbiri dzakasiyana dzeEI mifananidzo: zvakajairwa installers uye mimwe mifananidzo yekumhanyisa Live Sessions. Inowanikwa mu Iyi link, tinogona kudhawunirodha 32-bit uye 64-bit zvinyorwa zveavaisa muPlasma, GNOME uye Xfce graphic environments kana Live Media, ichiwanika 64bits muPlasma neGNOME uye mune 32bits uye 64bits yeXfce.
Izvo zvinoita zvakare kukwidziridza kubva kuMageia 6, chimwe chinhu chatichaita kubva pachinyakare kuisa ISO uye nekutevera matanho aya:
Tinodhawunirodha iyo ISO mufananidzo.
Isu tinogadzira yekuisa DVD kana USB. Vhura ichi chinyorwa une muenzaniso wekuti ungagadzira sei Live USB.
Isu tinotanga kubva kuDVD / USB. Kune izvi, zvakakosha kuti sarudzo inogoneswa kubva kuBIOS ndangariro yemidziyo yedu.
Isu tinosarudza iyo "Gadziridza" sarudzo.
Kana iwe ukafunga kusimudzira / kuisa Mageia 7, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Mageia 6, mugari wenhaka weMandriva ari pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Mageia 7 ikozvino yavapo, kuchine 32-bit vhezheni
Ndakazviedza uye zvaitaridzika kupora ne xfce
Pindura kune gerar
Kuongorora kweFirefox, bheji nyowani yeMozilla yeApple